China Earldom CC3 QC QC QC 3.0 နည်းပညာစစ်ဆေးခြင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်အားသွင်းခြင်း Carress Chructurer ထုတ်လုပ်သူများ - Earldom | Earldom
Earldom USB C Car Charger Super Mini Fast USB Carb Carber Carber PD&iPhone အတွက် 12/12 Pro ကို / မက်စ် / 12 Mini ကို / iPhone ကို /9က Galaxy S21 / 20/10 11 / Pro ကို / မက်စ / XR / XS / မက်စ / 8 နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့ QC 3.0 Dual-ဆိပ်ကမ်းမော်တော်ကား Adapter ကို
လက်ကိုင်ဖုန်းအတွက် Earldom WC14 Magnet 15W Airless Charm Carress Chargeter သံလိုက်ကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်
အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသော Earldom PD အစာရှောင်ခြင်း 45W QC4.0 လက်စွပ်စက်ရုံနှင့်အတူကားအတွက် USB-C မိုဘိုင်းဖုန်းအားသွင်းစက်အသေးစား
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ကားအားသွင်း
China Earldom CC3 QC QC QC 3.0 နည်းပညာစစ်ဆေးခြင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်အားသွင်းခြင်း Carress Chructurer ထုတ်လုပ်သူများ - Earldom
USB + အမျိုးအစား -C (PD)
ABS + သတ္တု
Earldom China Earldom CC3 QC QC QC QC 3.0 နည်းပညာစစ်ဆေးခြင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်အားသွင်းခြင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်အားသွင်းခြင်းကားအားသွင်းစက်ထုတ်လုပ်သူများ - Earldom, ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးသည်ကြွယ်ဝပြီးကွဲပြားခြားနားသည်။
QC အမြန်. ငွေသွင်းခြင်း QC 3.0 နည်းပညာစစ်ဆေးခြင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်အားသွင်းခြင်းကားအားသွင်းစက်
12-24v မော်ဒယ်များသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနှင့်ကား SUV ကား၏အရွယ်အစားကားများနှင့်အခြား Mainstream Models များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်
Huawei ၏ Super Fast Charge, PD, AFC, QC4.0 အတွက်အထောက်အပံ့ MTKPE အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းခြင်း
ဤထုတ်ကုန်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောရှုထောင့်တည်ငြိမ်မှုကိုပါ0င်သည်။ ၎င်းသည်ကိုက်သို့မဟုတ်လိမ်ပြီးနောက်, က၎င်း၏ရှုထောင့်အတွက်အပြောင်းအလဲများအဘယ်သူမျှမအပြောင်းအလဲများပြသထားတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, ကျွန်ုပ်တို့တွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုးကားချက်ရှိသည်။ ကျေးဇူးပြု. ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်း0န်ထမ်းများကိုဆက်သွယ်ပါ။
Shenzhen Kaisinuo Electronics Co. , Ltd. သည်မိုဘိုင်းဖုန်းဒေတာလပ်ဘေးရှိ, Car MP3, ChargerRer, Selfier ပစ္စည်းကိရိယာများ, လက်ကိုင်ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, Shenzhen Kaisinuo အီလက်ထရွန်နစ်အီလက်ထရွန်နစ် Co. , Ltd. သမာဓိရှိ, ၎င်းသည် EyDom Kasinuo ကဲ့သို့သော 3C ဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်များကိုပိုင်ဆိုင်သည်။